Al-Shabaab oo burburiyeen masaajid iyo dhismooyin muhiim ah
Xubno ka tirsan ururka diinta Islaanka ka been sheegay ee al-Shabaab ayaa dhawaan waxay burburiyeen masaajid iyo dhismeyaal muhiim ah oo dadweynaha Soomaaliyeed ka helayeen adeegyada aasaasiga ah ee ay dowladda bixiso oo ku yaallaan degmada Run-nirgood ee gobolka Shabeellada Dhexe.
Guddoomiyaha degmada Run-nirgood Macalim Muxudiin Maxamed Kulmiye oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in al-Shabaab ay barakicin ku haayaan dadka ku nool qeybo kamid ah degmadaasi.
Goobaha ay bur-buriyeen al-Shabaab oo u badan xarumo iyo hanti dan guud ayaa dhulka lala simay, waxayna sidoo kale barakiciyeen dhammaan dadkii degganaa halkaas. Sida uu sheegay guddoomiye Macalim Muxudiin.
Ma aha markii ugu horreysay ay kooxda dhiig-cabtada ah ee al-Shabaab ay burburiso dhismooyinka laga bixiyo adeegga shacabka. 14kii Bishii May sanadkii 2019 ayey Shabaab qarxiyeen Xarunta Maamulka Degmada Warta Nabadda, halkaasi oo ay ku dhaawacmeen shaqaalaha qaar, kuwana ay ku dhinteen. Waxaase suura gashay in dhismahaas dib loo dhiso oo adeeggii bulshada dib loo soo celiyo. Ururka nabad-diidka ah ee al-Shabaab wuxuu kasoo horjeedaa horumarka, nabadda iyo nolosha dadweynaha Soomaaliyeed.